Nooga Nature Nest - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSteve And Kaye
USteve And Kaye yi-Superhost
Elula, yabucala, etofotofo 2b 1 lg yokuhlambela indlu yeendwendwe ngaphezulu kwe-3 bay evalekileyo igaraji. Ukuphela kwe-culdesac ejikelezwe ngamaplanga e-TWRA. Iindlela ezinoxolo, ezolileyo zokuhamba emahlathini nakwindawo encinci yoluntu eChickamauga Lake emanzini ehlotyeni. Imizuzu emi-2 kuyo yonke into oyifunayo: igrosari kunye neevenkile zeepakethe, iikhemesti, ukutya okukhawulezayo, indawo yokutyela yaseMexico, yaseTaliyane neyasemazantsi, inkampu yaseChester Frost Park, indawo yokudlala, ukukhwela isikhephe kunye nokuloba; Imizuzu eyi-15 ukuya kwiindlela ezinkulu zokuhamba, i-20 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya i-25 ukuya edolophini
Indlu yeendwendwe iphezu kwegaraji yethu enkulu evalelweyo ecaleni kwekhaya lethu. Kukho amanyathelo ali-17 akhokelela kwindawo enkulu, ehlolwe kwindawo yokuphumla kunye nokubukela izilwanyana zasendle. Ucango kwangoko ngasekunene kanye ngaphakathi kwidekhi. Iibhedi zilingana nendlovukazi. Amagumbi okulala anezinxibo, iidrowa ezininzi, iindawo zokumisa ebusuku, ii-lg mirrored closets kunye nonomathotholo bewotshi. Igumbi lokuhlambela likhulu linebhafu/ishawari, iitawuli, iwasha/idryer kwigunjana, iblowdryer, intsimbi/ibhodi eyakhelweyo, iblow dryer. Sibonelela ngephepha lendlu yangasese, isepha yesandla elulwelo, indawo yokuhlambela, ishampoo kunye nesicoci sempahla. Ikhitshi elikhulu lineoveni yesitovu, imicrowave, umenzi wekofu, ifriji/ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, iipleyiti, iikomityi, izitya, iimbiza neepani; yonke into oyifunayo ukupheka kunye nokutya. Zonke izinto zokucoca ezisisiseko zinikezelwe. Eyona Intanethi ikhawulezayo kukho iEPB Internet/WIFI kunye neNetflix. Itafile yegumbi lokutyela elinezitulo ze-4, kodwa kukho i-counter bar eyahlula ikhitshi kunye nendawo yokutyela, kunye nezitulo ezi-2. Igumbi lokuhlala lipholile kunye ne-lg dbl ehleli kwi-loveseat, i-recliner, itafile yekofu kunye ne-flatscreen ye-lg phezu kwendawo yomlilo yegesi entle.
Isitalato esifileyo esinamakhaya ali-10 uninzi lwabahlali abadla umhlala-phantsi, abanobuhlobo, abathuleyo. Ngasemva kwendlu yethu isecaleni kwe State of TN yolondolozo lwendalo eneendlela zokuhamba ukuya kwichibi lamanzi ehlotyeni. Imizuzu emi-3 yokuqhuba ukuya kwinkampu ekulobeni ukuloba kwindawo yokudlala isikhephe eChester Frost County Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Steve And Kaye
Ikhaya lethu lisecaleni kwe-apt. Ukuba ufuna nantoni na sifikeleleka ngokulula khawubuze nje ngeAirBnB app. Nokuba sisekhaya, usenokungasiboni ngaphandle kokuba sisebenza eyadini okanye sijinga phezu komgangatho wethu. Sifuna ukuba uphumle kwaye uzive usekhaya, ukonwabele ukuhlala kwakho, kwaye uyazi ukuba silapha ukuba kukho into oyifunayo. Nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo siya kuhlonipha ubumfihlo bakho.
Ikhaya lethu lisecaleni kwe-apt. Ukuba ufuna nantoni na sifikeleleka ngokulula khawubuze nje ngeAirBnB app. Nokuba sisekhaya, usenokungasiboni ngaphandle kokuba sisebenza eyadini o…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Middle Valley